China Si3N4 baoritra keramika Mpanamboatra sy mpamatsy | Kangda
Baolina seramika silika manana tanjaka avo, fanoherana mitafy ambony, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny asidra sy alkaly, ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava ao anaty ranomasina, ary manana toetra tsara mifehy. Afaka miatrika ny fampiasana sarotra sy ny tontolo iainana miasa.
Baolina seramika Si3N4 manana hamafiny sy lanjany maivana. Rehefa ampiasaina amin'ny kojakoja manokana na fitaovana manokana izy ireo dia manana coefficient kely kokoa amin'ny fikorontanana sy ny hafainganam-pandehan'ny hery misintona, vokatr'izany dia mihena ny akanjo ary manitatra ny androm-piainan'ny kojakoja.
Baolina seramika Si3N4 mahatohitra ny mari-pana ambony ary afaka miasa milamina amin'ny tontolo iainana maripana ambany ambanin'ny 1200 degre Celsius misy fiovana kely. Fampisehoana hovitrovitra mafana kokoa: 900-1000 degre Celsius ny mari-pana hovitrovitra.
Izy io koa dia manana fananana manosotra tena ary azo ampiasaina amin'ny tontolo izay tsy misy maloto maloto loatra. Tongava fitaovam-pifidianana ho an'ny seramika seramika ary fitondra baolina seramika hybrid.
Raha ampitahaina amin'ny baolina vy, ny tombony lehibe amin'ny baolina seramika dia:
(1) Izy io dia maivana kokoa amin'ny 59% noho ny baolina vy, izay mampihena ny hery afovoany, mihodina ary mikatona eo amin'ny làlambe rehefa mihazakazaka haingana ny fiterahana;
(2) Ny fihodinan'ny elastika dia 44% lehibe kokoa noho ny vy, izay midika fa ny habetsaky ny fiovana dia kely kokoa noho ny an'ny vy vy rehefa iharan'ny fanerena;
(3) Ny hamafisana dia avo noho ny vy, HRC mahatratra 78;
(4) Ny coefficient an'ny fikorontanana dia kely, tsy misy andriamby, misy elatra elektrika ary mahatohitra kokoa ny harafesin'ny simika noho ny vy;
(5) Ny coefficient amin'ny fanitarana hafanana dia 1/4 an'ny vy, izay mahazaka ny fiovan'ny hafanana tampoka;
(6) Ny farany vita dia tsara kokoa, Ra dia afaka mahatratra 4-6 nanometro;
(7) Fanoherana ny hafanana avo, ny baolina seramika dia mbola manana tanjaka ambony sy hamafin'ny 1050 degre Celsius;
(8) Tsy ho harafesina izy io ary afaka miasa amin'ny fepetra fanosorana tsy misy solika.
Teo aloha: Baolina varahina / baolina varahina
Manaraka: ZrO2 Baolina seramika
G5 Si3n4 Baolina Ceramic
Baolina seramika Si3n4 G5